मनोरञ्जन – Khabaarpati
अब टिकटक स्टारले यसरी पाउँदैछन् ३५ लाखको कार, तपाई पनि यसरी हुनुहोस् सहभागी
November 11, 2021 adminLeaveaComment on अब टिकटक स्टारले यसरी पाउँदैछन् ३५ लाखको कार, तपाई पनि यसरी हुनुहोस् सहभागी
काठमाडौं । अब टिकटक प्रतियोगीतामा सहभागी भएर उपहार पनि जित्न सकिने भएको छ । सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्तामाझ टिकटकले लोकप्रियता हासिल गरिरहेको अवस्थालाई ख्याल राखेर प्रतियोगिता आयोजना गर्न लागिएको छ । टिकटकसम्बन्धी रियालिटी सो सुरु भएको छ । अहिले टेलिभिजनमा नृत्य, गायन, हास्य, प्रहसन तथा अन्य साहसिक विषयमा रियालिटी सोहरू चलिरहेका छन् । यही क्रममा टिकटक […]
November 11, 2021 adminLeaveaComment on मैले जीतु नेपाललाई धोका दिएको छैन : ‘फुलन्देकी आमा’
कलाकार उमेश राई ‘फुलन्देकी आमा’ ले आफूले जीतु नेपाल र ‘मुन्द्रेको कमेडी क्लब’ लाई धोका नदिएको बताएका छन् । ‘मुन्द्रेको कमेडी क्लब’ बन्दको बिषयमा आफ्नो नाम मुछिन थालेपछि उनले बन्द हुनुको कारण आफू नभएको स्पष्ट पारेका हुन् । लोकप्रिय टेलिभिजन कमेडी रियालिटी शो ‘मुन्द्रेको कमेडी क्लब’ सोमबारबाट बन्द भएको छ । कार्यक्रमका सञ्चालक जीतु नेपालले […]
मनोज गजुरेललाई मिना ढकालको अप्रिय शब्द प्रहार, ‘आफ्नै जोडिसँग भाइटिका लगायौ के हो?’
November 11, 2021 adminLeaveaComment on मनोज गजुरेललाई मिना ढकालको अप्रिय शब्द प्रहार, ‘आफ्नै जोडिसँग भाइटिका लगायौ के हो?’
काठमाडौं। हास्य कलाकार मनोज गजुरेलले अर्को बिहे गरिपछि पनि पूर्व पत्नि मिना ढकालले मनोजबारे चासो राख्न छोडकी छैनन् । उनले फेसबुकमा मनोजको तस्वीरलाई लिएर एक नराम्रो स्टाटस राखेकी छिन्। मनोजको नाम नलिइकनै मनोजको नयाँ जोडिलाई मिनाले अप्रिय लेखेकी हुन् । मिनाको स्टाटसमा लेखिएको छ । यस्पालीको भाइ टिकामा सबै मान्छेले दाजु भाइ दिदी बैनी संगको […]
November 10, 2021 adminLeaveaComment on जितुसंग दिपकले लिएकै हुन् त बदला ? जितु र दिपकले दिए एक अर्कालाई यस्तो जवाफ
काठमाडौं । टिभी सो मुन्द्रेको कमेडी क्लबबाट दीपाश्री निरौला बाहिरिएसँगै छक्का पञ्जा सिरिजबाट जितु नेपाल बाहिरिने गाइँगुइँ चल्यो । यसैसाता हलमा रिलिज भएको ‘छक्कापञ्जा-४’ टीजरमा समेत जितु नदेखिएपछि उक्त आशंकामा बल मिलेको छ । व्यक्तिगतरुपमा सम्बन्ध नबिग्रिएको बताउने गरेपनि व्यवसायिकरुपमा भने दीपकराज गिरीको टीम र जितु नेपालबीच व्यवसायिक सम्बन्ध अहिले छैन । जितु छक्कापञ्जा टीमबाट […]
उमेशको त्यो फोनले जब छाँगाबाट खसेजस्तै भएँ जितु
November 10, 2021 adminLeaveaComment on उमेशको त्यो फोनले जब छाँगाबाट खसेजस्तै भएँ जितु
November 10, 2021 adminLeaveaComment on ‘छक्का पञ्जा ४’ को ट्रेलरमा नदेखिएपछि रिसाएका जितुले १ दिन नहुँदै फेरी कुरा, गरे यस्तो घोषणा
हास्य कलाकार जितु नेपालले निर्माता तथा कलाकार दीपकराज गिरी र उनको टिमसँग चलचित्र ‘६ एकान ६’बाट सहकार्य गरे । त्यसपछि दीपकराज गिरी, केदार घिमिरे, जितु नेपाल र दीपाश्री निरौलाको टिमले ‘वडा नम्बर ६, छक्का पञ्जा, छक्का पञ्जा २, छक्का पञ्जा ३, छ माया छपक्कै’ निर्माण गरे । यी सबै चलचित्रले बक्स अफिसमा तहल्का नै मच्चाए […]
November 9, 2021 adminLeaveaComment on ‘छक्का पञ्जा ४’ को ट्रेलरमा आफुलाई नअटापछि यसरी रिस पोखे जितुले, गरे फिल्ममा काम नर्गने घोषणा
काठमाडौं- फिल्म ‘छक्का पञ्जा ४’ कलाकार जितु नेपाल नरहने भएका छन् । सोमबार कमेडी रियालटी शो ‘मुन्द्रेको कमेडी क्लब’ बन्द भएको जानकारी दिन आयोजित कार्यक्रममा जितुले आफु नरहने घोषणा गरेका हु्न । उनले ‘हिन्दी फिल्मका दर्शकसम्म पुगेको ‘छक्का पञ्जा ४’ को ट्रेलर नअटेको आफु फिल्ममा पनि नरहने बताए । जितुले भने, ‘म सामान्य कलाकारलाई दीपक […]
किन बन्द भयो ‘मुन्द्रेको कमेडी क्लब’ ?
November 9, 2021 adminLeaveaComment on किन बन्द भयो ‘मुन्द्रेको कमेडी क्लब’ ?
हास्यकलाकार जीतु नेपालले संचालन गर्दै आएको कमेडी रियालिटी शो ‘मुन्द्रेको कमेडी क्लब’ आजदेखि सदाका लागि बन्द हुने भएको छ । संचालक जीतु नेपालले सोमबार एक पत्रकार भेटघाट गर्दै शो बन्द गर्ने घोषणा गरे । प्रत्येक सोमबार साँझ ८ः५० मा नेपाल टेलिभिजनबाट प्रसारण हुने गरेको शोको अन्तिम भाग आज प्रसारण हुनेछ । ‘हामीले ‘मुन्द्रेको कमेडी क्लब’ […]
November 7, 2021 adminLeaveaComment on भिटेनको नयाँ गीत ‘गल्ली सडक’ युट्युव ट्रेन्डिङ वानमा
काठमाडौं । गायक समिर तामाङ ‘भिटेन’को नयाँ गीत ‘गल्ली सडक’ युट्युवको ट्रेन्डिङ एकमा पुगेको छ ।एकसाता अघि अपलोड गरिएको उक्त गीत युट्युवको ट्रेन्डिङ एकमा परेको हो । उनको गीतमा नेपाली राजनीतिलाई व्यङ्ग्य गरिएको छ । उनी पहिलेबाटै गीतकै कारण आलोचित हुँदै आएका छन् ।कतिपय पटक प्रहरीले उनलाई गीतकै कारण पक्राउ गर्दै आएको छ । गीतको […]
तस्बिरमा हेर्नुहोस् कलाकारको भाइटीका !
November 7, 2021 adminLeaveaComment on तस्बिरमा हेर्नुहोस् कलाकारको भाइटीका !
नेपालीहरुको दोस्रो महान चाड तिहारको आज अन्तिम दिन अर्थात् भाइटीका । कार्तिक शुक्ल द्वितीया तिथिका दिन भाइटीका मनाइन्छ । आज ११ बजेर २ मिनेटमा भाइटीकाको उत्तम साइत थियो । यमपञ्चकको पाँचौं दिन दिदीबहिनीले आफ्ना दाजुभाइलाई श्रद्धा, आस्था र निष्ठाका साथ दीर्घायु, आरोग्य र ऐश्वर्य प्राप्तिको कामना गर्दै सप्तरंगी टीका लगाइदिएर उपहार दिने प्रचलन छ ।गएको […]